Dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada baladwayne | raascasayrmedia.com
← Faroole weli kama qaan gaarin hadal xanaf leh oo keenikara kala fogaansho
Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inuusan doorasho diidanayn, balse loo baahan in laga tashado →
April 30, 2011 · 4:07 am
Dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada baladwayne
Dagaalo xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Maamulka Dooxada Shabelle iyo kuwa Xarakada Al Shabaab ayaa galinkii dambe ee maanta waxaa ay ka dhaceen deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gobolka Hiiraan, dagaal culus oo u dhaxeeya ciidmada Maamulka Dooxada Shabelle iyo Xarakada Al Shabaab ayaa galinkii dambe ee maanta waxaa ay ku dhaceen deegaano dhinaca Galbeed ka xigga Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa la sheegay in uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Bacaad oo 10-KM dhinaca Kalabeyr kaga beegan dhanka Baladwayne, waxana wararka ay intaasi ku darayaan in dagaalka uu bilaawday kadib markii Ciidamada Xarakada Al Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin Ciidamada Maamulka Dooxada Shabelle ay ku lahaayeen deegaanka Bacaad ee gobolka Hiiraan.
Wasiiraka Warfafint Maamulka Dooxada Shabelle Max’ed Nuur Cagga Joog oo caawa la hadlay Idaacadda Shabelle ayaa waxaa uu sheegay in ciidamadoodu ay iska difaaceen weerar uu tilmaamay in Al Shabaab ay kusoo qaadeen fariisimo ay ku lahaayeen deegaanka Bacaad, isagoo sheegay in labo ka mid ah dagaalyahanada Shabaab ay ku dileen dagaalkaasi sida uu hadalka u dhigay.
Max’ed Nuur Cagga Joog waxaa uu intaasi ku daray in ciidamada Dooxada Shabelle ay iminka gacanta ku hayaan deegaankii lagu dagaalamay, waxaana uu sheegay inay la wareegeen deegaano kale oo ay ku suganaayeen sida uu carabaabay Xarakada Al Shabaab.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca Xarakada Al Shabaab oo ku aadan dagaaladaasi, inkastoo iminka laga dareemayo goobihii lagu dagaalamay xaalad deganaansho aan sidaasi u caga buurneyn, waxana dagaalkaani uu qayb ka noqonayaa dagaalo maalmihii u dambeeyay ka dhacayay gobolada Jubooyinka iyo Gedo ee dalka Soomaaliya.